Isimada iyo bulshada Baay oo banaan-bax ka dhan ah shirka Brussels maanta ka dhigay Baydbabo – Radio Daljir
Isimada iyo bulshada Baay oo banaan-bax ka dhan ah shirka Brussels maanta ka dhigay Baydbabo
Seteembar 16, 2013 3:24 b 0
Baydhabo, September 16, 2013 – Xaruunta gobolka Baay ee Baydhabo waxaa maanta ka bilowday banaan-bax balaaran oo looga soo horjeedo shirka arrimaha Soomaaliya ee maanta ka furmaya Brussels, kaas oo horey loogu baaqay.
Qeybaha kala duwan ee Bulshada iyo waxgaradka gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya ayaa qeyb ka ah banaan-baxa looga soo horjeedo shirka Brussels, iyadoo dadweynuhu ku dhawaaqayaan ereyo ka dhan ah maamulka.
Malaaq Cali Cabdiraxmaan Shiino oo la hadlay war-baahinta gudaha ayaa sheegay in banaan-baxu bilowday, isla markaasna uu socon doono ilaa maanta gelinka hore iyadoo lagaga soo horjeedo gebi ahaanba shirka Brussels iyo qorshaha dowladda federaalka ah.
Ereyo ka dhan ah shirka maanta furmaya iyo dowladda Soomaaliya ayaa dadweynuhu ku dhawaaqayeen, waxaana ay socodka ka bilaabeen Barxada magaalada iyagoo socod ku tegey ilaa garoonka kubbada cagta ee magaaladaas.
Waxgaradka iyo Issimada gobollada Bay iyo Bakool ayaa ku dhawaaqay in ay kalsoonidii kala noqdeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kadib heshiis dhex-maray maamulka Jubba iyo dowladda federaalka 28 bishii Agoosto ee ina dhaafay, sidoo kale Issimada Bay waxay diideen shirka Brussels.
Maamulka Galkacayo ee Puntland oo DF ku eedeyey in ay Galmudug ku taageerto dal-durugsi (MAQAL)
Prof. Gaas oo shaaciyey in ololihiisa doorashada uu dhowaan ka bilaabayo Puntland (Dhegeyso)